လိုပယ်တက်ဂီအတွက်တော့ အဆိုးရွားဆုံး အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ
နှစ်ပေါင်း (၅၀)အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး မှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်နည်းပြ လိုပယ်တက်ဂီ Julen Lopetegui
29 Oct 2018 . 6:50 PM
ရီးယဲလ်နည်းပြ လိုပယ်တက်ဂီ Julen Lopetegui ကတော့ စိတ်ပျက်စရာ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ရီးယဲလ်အသင်းကို စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးလာလီဂါရာသီမှာ ရလဒ် အဆိုးရွားဆုံးနည်းပြ (၅)ဦးစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီရာသီအစက ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြသစ်ဖြစ်လာတဲ့ လိုပယ်တက်ဂီဟာ လာလီဂါပွဲစဉ် (၁၀)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ (၄)ပွဲနိုင်၊ (၂)ပွဲသရေ၊ (၄)ပွဲရှုံးနဲ့ (၁၄)မှတ်သာ ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း(၅၀)အတွင်း ရီးယဲလ်နည်းပြသစ်တွေထဲမှာ အဆိုးရွားဆုံး ရလဒ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
လိုပယ်တက်ဂီလိုပဲ ရီးယဲလ်နည်းပြဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ရလဒ်ဆိုးတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေက Quirante (၄ပွဲနိုင်- ၁ပွဲသရေ- ၆ပွဲ ရှုံး) ၊ Encinas (၃ပွဲနိုင်- ၄ပွဲသရေ- ၃ပွဲရှုံး) ၊ Keeping (၃ပွဲနိုင် – ၃ပွဲသရေ၊ ၄ပွဲရှုံး) ၊ Hertzka (၃ပွဲနိုင် – ၃ပွဲသရေ- ၄ပွဲရှုံး) တို့ဖြစ်ပြီး အခု လိုပယ်တက်ဂီလည်း ပါဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ရာသီအစ(၁၄)ပွဲမှာ (၆)ပွဲအထိ ရှုံးခဲ့တဲ့ နည်းပြက (၅)ဦးသာ ရှိခဲ့ပြီး တကယ်လို့ ရီးယဲလ်နည်းပြအဖြစ် လိုပယ်တက်ဂီသာ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် အဲဒီစာရင်းထဲမှာ မပါဝင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။ ဘာစီလိုနာကို (၅-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ်ခဲ့တာက လိုပယ်တက်ဂီရဲ့ နည်းပြသက်တမ်းတစ်လျှောက် (၂၁၁)ပွဲမှာ (၄)ပွဲမြောက် (၅)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့နည်းပြဘ၀ အဆိုးရွားဆုံး ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်မှုက ပေါ်တိုအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေတဲ့ကာလတုန်းက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို (၆-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Diario Alerta,Fox Sports
နှဈပေါငျး (၅၀)အတှငျး အဆိုးရှားဆုံး မှတျတမျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျနညျးပွ လိုပယျတကျဂီ Julen Lopetegui
ရီးယဲလျနညျးပွ လိုပယျတကျဂီ Julen Lopetegui ကတော့ စိတျပကျြစရာ မှတျတမျးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါပွီ။ အဲဒါကတော့ ရီးယဲလျအသငျးကို စတငျကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးလာလီဂါရာသီမှာ ရလဒျ အဆိုးရှားဆုံးနညျးပွ (၅)ဦးစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တာပါပဲ။ ဒီရာသီအစက ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွသဈဖွဈလာတဲ့ လိုပယျတကျဂီဟာ လာလီဂါပှဲစဉျ (၁၀)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ (၄)ပှဲနိုငျ၊ (၂)ပှဲသရေ၊ (၄)ပှဲရှုံးနဲ့ (၁၄)မှတျသာ ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။ ဒါဟာ နှဈပေါငျး(၅၀)အတှငျး ရီးယဲလျနညျးပွသဈတှထေဲမှာ အဆိုးရှားဆုံး ရလဒျလညျးဖွဈခဲ့တယျ။
လိုပယျတကျဂီလိုပဲ ရီးယဲလျနညျးပွဘ၀ ပထမဆုံးရာသီမှာ ရလဒျဆိုးတှေ ကွုံတှခေဲ့ရသူတှကေ Quirante (၄ပှဲနိုငျ- ၁ပှဲသရေ- ၆ပှဲ ရှုံး) ၊ Encinas (၃ပှဲနိုငျ- ၄ပှဲသရေ- ၃ပှဲရှုံး) ၊ Keeping (၃ပှဲနိုငျ – ၃ပှဲသရေ၊ ၄ပှဲရှုံး) ၊ Hertzka (၃ပှဲနိုငျ – ၃ပှဲသရေ- ၄ပှဲရှုံး) တို့ဖွဈပွီး အခု လိုပယျတကျဂီလညျး ပါဝငျလာခဲ့ပါပွီ။ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ရာသီအစ(၁၄)ပှဲမှာ (၆)ပှဲအထိ ရှုံးခဲ့တဲ့ နညျးပွက (၅)ဦးသာ ရှိခဲ့ပွီး တကယျလို့ ရီးယဲလျနညျးပွအဖွဈ လိုပယျတကျဂီသာ ဆကျရှိနမေယျဆိုရငျ အဲဒီစာရငျးထဲမှာ မပါဝငျအောငျ ကွိုးစားရမှာပါ။ ဘာစီလိုနာကို (၅-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျခဲ့တာက လိုပယျတကျဂီရဲ့ နညျးပွသကျတမျးတဈလြှောကျ (၂၁၁)ပှဲမှာ (၄)ပှဲမွောကျ (၅)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး သူ့နညျးပွဘ၀ အဆိုးရှားဆုံး ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့မှုက ပျေါတိုအသငျးကို ကိုငျတှယျနတေဲ့ကာလတုနျးက ဘိုငျယနျမွူးနဈကို (၆-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဂရန်နာဒါအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ
by Naing Linn . 16 hours ago